((Ma) Nwetara Ozi: Gịnị kpatara ọgụgụ isi si rụpụta ọdịnihu siri ike maka ozi ịntanetị ịre ahịa | Martech Zone
O siri ike ikwere na email anọwo kemgbe afọ 45. Imirikiti ndị na-ere ahịa taa ebibeghị n’ụwa na enweghị email.
Agbanyeghị na etinyere ọtụtụ n'ime anyị ogologo oge maka ndụ na azụmahịa maka ogologo oge, ahụmịhe onye ọrụ email agbanweela obere kemgbe ezigara ozi izizi. 1971.
O doro anya, anyị nwere ike ịnweta email na ngwaọrụ ndị ọzọ, mara mma n'oge ọ bụla, mana usoro agbanwebeghị agbanwe. Onye zitere ya kụrụ na oge aka ya, ozi a na-aga igbe mbata wee chere ka onye nata ga-emepe ya, nwee olile anya tupu ọ ehichapụ ya.
Site n'oge ruo n'oge, ọtụtụ ndị na-ebu amụma amụma na email ga-apụ n'anya, dochie anya ngwa ngwa ozi ọhụrụ na nke oyi. Mana dịka Mark Twain, a na-ekwubiga okwu banyere ọnwụ email. Ọ ka bụ usoro nkwukọrịta dị mkpa na nke a na-ejikarị eme ihe n'etiti azụmahịa na ndị ahịa - ọ bụghị naanị otu, n'ezie, kama akụkụ dị egwu nke ngwakọta.
O siri ike 100 ijeri azụmahịa ozi ịntanetị ezigara kwa ụbọchị, a na-atụ anya na ọnụọgụ akaụntụ email azụmahịa ga-eto ruo ijeri 4.9 site na njedebe nke afọ a. Email na-ewu ewu karịsịa na B2B, ebe ọ na-enye ohere maka ogologo nkwukọrịta miri emi ma e jiri ya tụnyere mgbasa ozi mmekọrịta na ụdị izi ozi ndị ọzọ. N'ezie, ndị ahịa B2B na-ekwu ahịa email bụ 40 ugboro irè karịa mmadụ mgbasa ozi na ha na-eduga
Ọbụghị naanị na email anaghị apụ n'oge na-adịghị anya, mana ọdịnihu dị mma, n'ihi teknụzụ ọgụgụ isi nke dị njikere iji megharịa ahụmịhe email ahụ. Site na inyocha akparamagwa akparamagwa nke mepere, ihichapụ na ime eme na ozi ịntanetị, AI nwere ike inyere ndị na-ere ahịa aka ka ha zigara ndị ahịa 'na atụmanya' mmasị ha.
Ruo ugbu a, ọtụtụ ihe ndị ahịa na-eme na email na-adabere na ọdịnaya. Enwere ụlọ ọrụ dum raara nye iji nyere aka mepụta ozi email kachasị mkpa iji rịọ nzaghachi na mmemme. Ntughari ohuru ndi elebara anya na edeputara ha. Ndepụta sourcing. Ndepụta na-eto eto. Depụta ịdị ọcha.
Ihe a niile dị mkpa, mana ịghọta mgbe na ihe kpatara ndị nnata ji emeghe ozi ịntanetị nọgidere bụrụ ihe omimi - ọ bụkwa ihe dị mkpa idozi. Zipu nke ukwuu, ị na-echekwa ndị ahịa iwe. Ezigala ụdị email ziri ezi - n'oge kwesịrị ekwesị - ị nwere ike ịla n'iyi n'ọgba aghara nke mmadụ maka igbe nnabata.
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa emeela mgbalị siri ike iji hazie ọdịnaya, elebara anya na ịhazi usoro nnyefe ahụ adịchaghị. Ruo ugbu a, ndị na-ere ahịa ejirila oge nkesa email kesaa site na nghọta ma ọ bụ akaebe doro anya anakọtara site na nnukwu otu ma jiri aka nyochaa. Na mgbakwunye na ịnabata oge mgbe enwere ike ịgụ ozi ịntanetị, nyocha a nke napịpị adịghị ekwu okwu n'ezie mgbe ndị mmadụ na-adịkarị njikere ịzaghachi ma mee ihe.
Iji merie, ndị na-ere ahịa ga-achọwanye ka hazie ịnyefe ozi ahịa email dabere na ha ahaziri ọdịnaya nke ozi ndị ahụ. N'ihi ọganihu na AI na mmụta igwe, ụdị nnyefe nke onwe a na-aghọ eziokwu.
Teknụzụ na-apụta iji nyere ndị na-ere ahịa aka ịkọwa oge kacha mma iji zipu ozi. Dịka ọmụmaatụ, sistemụ nwere ike ịmụ na Sean na-enwekarị ike ịgụ ma mee ihe na ozi ịntanetị ọhụrụ na 5: 45PM mgbe ọ na-aga ụlọ ụgbọ oloko. N'aka nke ọzọ Trey na-agụ email ya mgbe ọ na-ehi ụra na 11 PM mana ọ naghị eme ihe ọ bụla ruo mgbe ọ nọdụrụ ala na tebụl ya n'echi ya.
Sistemụ mmụta igwe nwere ike ịchọpụta usoro njikarịcha email, cheta ha ma bulie usoro iji zipu ozi gaa n'elu igbe mbata n'oge windo njikọ kacha mma.
Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị na-enwe ekele na atụmanya nwere ndepụta na-eto eto nke ọwa nkwukọrịta masịrị. Ozi ederede. Social media ozi nyiwe. Push notma Ọkwa na a mobile ngwa.
N’oge na-adịghị anya, sistemụ mmụta igwe arụ ọrụ maka izipụ ozi ịntanetị nwere ike ịmụ ọwa kachasị iji nyefee ozi. Nri ọdịnaya, ewepụtara na oge kwesịrị ekwesị, site na ọwa akọwapụtara oge.
Mmekọrịta ọ bụla gị na ndị ahịa metụtara. Mkparịta ụka ọ bụla gị na ndị ahịa nwere bụ ohere iji tinye nzaghachi nke na-eme ka njem ịzụ ha na ụzọ ọhụrụ na ụzọ dị iche iche. Onye ọ bụla nwere usoro ịzụta dị iche iche.
Na omenala, ndị na-ere ahịa ejirila ọtụtụ awa na-anwa ịkọwapụta njem ịzụ ahịa maka ọtụtụ ndị ahịa ma wụsara simenti na usoro ahụ. Sistemu enweghị ụzọ iji imeghari na mgbanwe ndị a na-apụghị izere ezere na usoro ịzụ onye ọ bụla ma enweghị ike imeghachi omume na mgbanwe ọ bụla gburugburu ebe obibi.
Site na ozi email echere ka ọ bụrụ njikọ dị oke mkpa n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa, ọrụ AI na-ezi nkịta dị afọ iri anọ na ise bụ usoro nnabata. Sistemụ na-ere ahịa azụmaahịa ga-abụrịrị ugbu a -eche banyere ndị ahịa ọ bụla, ọdịnaya ọ bụla, ma dakọtara ha na oge iji zute ebumnuche azụmahịa. Nyefee ozi email nke ọma kwesịrị ịbụ akụkụ dị mkpa nke ahụ.
Tags: Na-aga n'ihuaiAmamịghe echicheb2bịzụ njememail Marketingedu ọgbọngwa igweemail ahia